musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Thailand, Tourism, uye Nzvimbo Dzvuku Dzvuku: Haazi mashoko akanaka
nhau • Kuvakazve • Shopping • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
COVID Zones muThailand anowedzera Nzvimbo Dzvuku Dzvuku
Thailand haina kugadzirira kugamuchira vashanyi chero nguva munguva pfupi. Nekusiyana kweDelta kuri kuwedzera, Humambo huri kuvhara mamwe matunhu - uye izvi zvinogona kupedza mwedzi wese.
Hurumende yeThai yakawedzera matanho ekuvhara nekudzora nguva yemamwe masvondo maviri kutanga nemusi weChipiri nemamwe mapurovhinzi gumi nematanhatu akawedzerwa pachinyorwa che "rima dzvuku kana rakanyanya uye rakasimba kudzora nzvimbo", nzvimbo dzakanyanya kutambudzwa nedenda reCovid-16.
ICentre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) yakaraira nguva yekudzoka kumba kubva na9 pm – 4 am uye mamwe matanho akasimba achamisikidzwa Bangkok nemamwe mapurovhinzi makumi maviri nemasere muThailand kwemavhiki maviri kutanga mangwana.
CCSA inotarisirwa kuti iongorore mamiriro enjodzi zvakare muna Aug 18. Zvichida kumwe kuwedzera kwekukiya kusvika kupera kwemwedzi uno kunogona kutarisirwa.
CCSA zvakadaro yakarerutsa zvirambidzo mumaresitorendi uye eateries pazvitoro munzvimbo dzine rima dzvuku, zvichivabvumira kutengesa chikafu kuburikidza nekuendesa vachishandisa mapuratifomu epamhepo.
Zviripo zviripo munzvimbo dzine rima dzvuku zvicharamba zviripo, kusanganisira ma curbs pakufamba kwematunhu.
Chero ani zvake anoda kupinda munzvimbo dzvuku dzvuku anofanirwa kuve nechikonzero chakakodzera uye anozovhenekwa paanopinda.
Kwete vanhu vanopfuura vashanu vanobvumidzwa kusangana.
Zvitoro, zvitoro zvemadhipatimendi, nenzvimbo dzemashopu enharaunda zvakavharwa kusara kwezvitoro, zvitoro zvemishonga, uye nzvimbo dzekudzivirira nhomba Hapana zvekufambisa zveveruzhinji zvinowanikwa kubva na9pm kusvika 4am. Unyanzvi mukutakura kwevanhu hunowanikwa ku50%
Vanhu vari mumatunhu matsvuku erima vanokurudzirwa kuti vashande kubva kumba.
Nguva dzekudzika uye dzekuvhara dzakasimbiswa kuGreater Bangkok - Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani neNakhon Pathom, pamwe nematunhu mana ekumaodzanyemba emuganhu wePattani, Yala, Narathiwat neSongkhla kubva muna Chikunguru 12.
Chon Buri, Chachoengsao, uye Ayutthaya vakawedzerwa kune akanyorwa muna Chikunguru 20. Matanho azvino achapera neMuvhuro.
CCSA nezuro yakawedzera mamwe matunhu gumi nematanhatu kunzvimbo yakasviba tsvuku - Ang Thong, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi, Lop Buri, Phetchabun, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Prachin Buri, Ratchaburi, Rayong, Samut Songkhram, Saraburi, Sing Buri , Suphan Buri, uye Tak.
Izvo zvakawanikwa kuti huwandu hwehutachiona muBangkok hwakaratidza zviratidzo zvekudzikira, kuverengera 39% yehutachiona nyika yose nepo hutachiona huwandu mune mamwe matunhu hwakakwira nekuda kwekusiyana kweDelta.
Hurumende yeThailand iri kuronga kuunza kunze kwekudzivirira kweRussia Sputnik kupa hutachiona kuvashandi vemberi.
Nyanzvi dzehutano dzakabvumirana kuti huwandu hwehutachiona hwakanyanya muThailand hungangoenderera mukati memwedzi miviri inotevera.
Thaniwan Kulmongkol, purezidhendi weThai Restaurant Association, akatambira sarudzo dzeCCSA dzekubvumidza maresitorendi pazvitoro kutengesa chikafu online.
Nyika yakanyoresa 18,027 mitsva mitsva uye 133 nyowani yeCovid-19 kufa mumaawa makumi maviri nemana apfuura.